Phupha ngentsimbi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Intsimbi sisixhobo seacoustic esikhupha umqondiso. Intsimbi ngokubanzi iqulethe intsimbi, eyintsimbi evusa intsimbi, kunye nesando, esivuselela ukungcangcazela. Xa kukhala intsimbi, kufuneka kutsale ingqalelo. Ke unokukhumbuza umntu ngento ethile okanye ubonise into xa ikhalayo. Iintsimbi zisetyenziswa, umzekelo, kwiminyango njengentsimbi okanye kwiialamu njengeentsimbi.
Kodwa ungayiva nentsimbi ngaphakathi el mundo yamaphupha. Apho, ngapha koko, kunqabile ukuba kukho imiqondiso yeacoustic, ke ingqalelo kufuneka ihlawulwe kwi "bell" uphawu. Iphupha elo kufuneka licinge malunga nentsimbi efuna ukufumana ingqwalaselo yakho okanye into enokufuna ukukukhumbuza ngayo.
Abantu abaninzi baphupha isandi esivela kwintsimbi. Ezinye iimeko zokuphupha ngentsimbi zenzeka rhoqo kunabanye. Funda okungakumbi malunga noku kuqala ngaphambi kokuqhubela phambili ekutolikeni uphawu lweentsimbi "zentsimbi":
1 Isimboli yamaphupha «intsimbi» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukuva ukukhala ephupheni lakho
1.2 Ngubani okanye yintoni ekhalisa intsimbi kwaye yenza isandi ephupheni?
1.2.1 Ifowuni iyakhala kwisiganeko sephupha, i-rrring, i-rrring!
1.2.2 Ikhalela iwotshi ye-alamu - ukutolikwa kwamaphupha
1.2.3 Kunkqonkqozwa ephupheni lam
1.2.4 Ding dong… Xa iintsimbi ezinkulu zikhwaza kakhulu ephupheni
2 Uphawu lwephupha «intsimbi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «intsimbi» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «intsimbi» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «intsimbi» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukuva ukukhala ephupheni lakho
Ngapha koko, iithowuni zihlala zivakala ngokuzolileyo emaphupheni. Ingxolo ibangelwa ziimpembelelo zangaphandle, kodwa zinokuba yimveliso emsulwa yokungazi kwethu emaphupheni. Ukuba le yeyokugqibela, imeko yentsimbi ibonisa iindaba. Kungekudala umphuphi unokufumana umyalezo obalulekileyo ukuba ulangazelela ixesha elide okanye ubuncinci ukuba uyakrokrela ukuba ngenye imini uya kumfumana. - Ulonwabo luqinisekisiwe!
Ngubani okanye yintoni ekhalisa intsimbi kwaye yenza isandi ephupheni?
Ifowuni iyakhala kwisiganeko sephupha, i-rrring, i-rrring!
Ayisiyi kuphela ukuva umnxeba ukhala ngalo lonke ixesha kubomi bemihla ngemihla, nokuba silele sicinga ukuba sinokuva iselfowuni ikhala. Ngamanye amaxesha iphupha i-smartphone ikhala ngeringithoni ethile, uncuthu lwayo, ewe, lunomdla kutoliko oluchanekileyo. Umnxeba wasemhlabeni okhalayo okanye iselfowuni, apho ufumana umnxeba ephupheni, ubhengeza iindaba ezimnandi njengomfanekiso wephupha. Nabani na okhathazwa kukukhala kwephupha ukoyiswa luxinzelelo, nakwilizwe elivukayo. Ukuphumla kuya kuba kuhle.
Ukuba iselfowuni ikhala ephupheni ngenxa yeSMS okanye umyalezo weWhatsApp, oko kunokubangela utshintsho. Utshintsho lukhona ngokuqinisekileyo, kodwa ngexesha lephupha akukacaci kulowo uphuphayo ukuba unazo kusini na ezi zicwangciso. Umnqweno wotshintsho ungcwatyelwe nzulu kwi-subconscious.
Ikhalela iwotshi ye-alamu - ukutolikwa kwamaphupha
Kuyenzeka ukuba sive iwotshi yealam ikhala ngelixa silele kwaye endaweni yokuvuka sifaka isandi ebuthongweni bethu size sibuyele ekulaleni. Nangona kunjalo, kukho amaphupha angachaphazelekiyo ziimpembelelo zangaphandle; Kule meko, ukukhala kwewotshi ye-alam kubonisa ukuba kunikwe ingqalelo ngakumbi kunesiqhelo ebomini bokuvuka. Ngaphandle koko, kukho into ebalulekileyo enokulibala.
Kunkqonkqozwa ephupheni lam
Ukuba umi phambi komnyango ovaliweyo ephupheni, ungakhala okanye ukhale intsimbi. Ukuba uyayibona intsimbi yasemnyango, intsimbi yasemnyango ihlala isetyenziswa kwaye unokuva kwankqonkqoza ephupheni. Ukuba kukho i-intercom kunkqonkqozo, umntu kufuneka azame ukukhumbula into eyathethwayo ephupheni ukuze afake lo mkhondo kuhlalutyo lwamaphupha.
Isandi sentsimbi yokungena emnyango wangaphambili okanye naluphi na olunye uhlobo lomnyango lubonisa ukuba kukho imiqobo elinde umphuphi, ubuncinci ukuba ucango luhlala luvaliwe kwaye lwenza isithintelo. Ukuba uyayivula ephupheni emva kwentsimbi yokungena emnyango okanye ukuba uyayivula ngokwakho kwaye ungenise umntu, ubunzima bunokoyiswa.
Kule meko, igama elikwinkqonkqo okanye umntu okhalayo ephupheni unokubonelela ngolwazi. Ngaba yayiliqabane? Umntu osuka kusapho? Umhlobo? Okanye mhlawumbi usebenza naye? Kule nto kunokugqitywa kuyo nayiphi na indawo yobomi kanye iingxaki ezinokuvela.
Ding dong… Xa iintsimbi ezinkulu zikhwaza kakhulu ephupheni
Ngaba ukhe weva iintsimbi zecawa zikhala ephupheni? Isandi sentsimbi egqumayo sitolikwa kutoliko lwengqondo njengophawu lokuba lixesha lokuthi ndlela-ntle kwinto ebalulekileyo. Umphuphi unokujonga phambili kuphuhliso oluqhubekayo lobuntu.
I-steeple ngokwayo ayisosimboli semiyalezo emitsha, kodwa ikwasisasazo seendaba-umphuphi unokuba nexhala lokuba abantu abaninzi banokufumanisa.
Uphawu lwephupha «intsimbi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ingxolo enkulu ayisoloko iviwe kwilizwe lamaphupha, kodwa kukho nabaphuphi abakuqondayo ukukhala xa ulele. Ukuba iphupha eliva intsimbi enkulu, unokulindela elungileyo kwaye intle. Izaziso ndijonge phambili. Mhlawumbi ikwangumnyhadala omnandi obhengezwe ngentsimbi.
Rhoqo intsimbi ikwabonisa ulwazi olubalulekileyo nolunomdla oluya kunceda ukuphupha ngesigqibo esikhulu.
Nangona kunjalo, ukuba kwihlabathi lamaphupha ungabona intsimbi engakhaliyo kwaye ihlale ithe cwaka, iyabhengeza Ubugorha obukhulu Ngaloo nto, ukuphupha kusemngciphekweni, kodwa akuyi kuphumelela.
Ukuba iphupha ngokwalo liyakhala kwaye lenze ukuba likhale, kungekudala liza kuba lilungele omnye umntu. uvuyo yenza ngaphandle kokuyiqonda.
Uphawu lwephupha «intsimbi» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yephupha, intsimbi kufuneka isetyenziswe ukuze umntu olalayo azi into ethile. Lo mqondiso womeleleyo uhlala unyanzela umphuphi ukuba enze njalo ebomini bakhe. Utshintsho ukuzisa.
Nangona kunjalo, njengomgaqo jikelele, lo mfanekiso wephupha awuniki mqondiso wesiphumo solu tshintsho. Ngamanye amaxesha intsimbi ephuphileyo okanye i-chime isebenza njengomqondiso onobungozi omele ukuba ubangele ukuba iphupha ekugqibeleni lingene kwaye lithathe inyathelo.
Ukuba ngumntu oleleyo ofaka intsimbi kwilizwe lamaphupha, bahlala bekhona ebomini bokuvuka. Nqwenelaukutsala umdla kuwe. Unokufuna ukukhala intsimbi yomntu othile onokuthi angakuhoyi okanye angakuhoyi kude kube ngoku.
Uphawu lwephupha «intsimbi» - ukutolika kokomoya
Intsimbi isetyenziselwa ukutolika amaphupha okomoya njengophawu lokuvusa kwaye Yiba esebenzayo itolikwe ngokuphupha. Kuya kufuneka uthathe inxaxheba ebomini kwaye unakekele ukukhula kwakho (kokomoya) ngokuzimeleyo.